FAALO:-Maakhir State Of Somalia maaha inuu u kala hiiliyo Reer Sool ee waa inuu nabad ugu baaqaa | maakhir.com
FAALO:-Maakhir State Of Somalia maaha inuu u kala hiiliyo Reer Sool ee waa inuu nabad ugu baaqaa
October 18, 2007 in Maakhir
Faaladan waxaa igu kalifey inaan qoro in Cade Muuse oo Reer Maakhir hiil weydiistey iyadoo wasiirkiisa xanaanada Xoolaha uu kusoo wajahan yahay Xero Maakhir, taasina ay dhalisey in xiisad cusub oo aan looga baahneyn Maakhir. Cade Muuse sidoo kale waxa uu maanta uu isku dayey inuu Caadifada Harti isticmaalo isagoo sida la sheegey la Hadley wax garad Reer Maakhir ah si ay ciidan ugu soo diraan. Dagaalada ka soo cusboonaadey Xero Dhulbahante waa dagaalo nasiib daro ah, waana dagaalo laga naxo iyadoo ay beesha Dhulbahante inaga muteysteen ineynu tusno hiil xaga caawinaada shacabka ah. Sool dhibka ka jira waxaa xalin kara Reer laascaanood oo qura, umadani iyadaa aayaheeda ka tashata oo qaraarkeeda qaadata.
Faalooyin badan baa laga qorey musiibada Sool iyadoo dadka qaarkood aad moodid iney ku deg degeen jawaabaha iyo waxa lagu tilmaamo xal lagu xalin karo dhibka jira, hase yeeshee arin kasta waxaa haboon in laga baaraan dego oo laga fiirsado. Mushkiladu waxay salka ku hayso waa in la ogaadaa, waana in arinta sida ay tahay aan laga leexin iyadoo taas looga dan leeyahay inaan seegin xaqiiqada.
Dhibka Sool ku habsadey waa arin soo jiitameysey in Mudo ah iyadoo aad moodid maamulada Somaliland iyo kuwa Puntlandba ay runtii door bideen iney faraha la galaan iyagoo ka la diraya dad walaalo ah oo isku dhiig ah. Somaliland anigoon kala leexaneyn eeda waxay ku dhaqaaqdey taariikhda ayaa qoreysa, kana faaloon doonta, arintan ay dhex galeen oo ay dad walaalo ah ukala hiiliyeen iyadey kusoo noqon doontaa mar dhow ama mar fogba, sababtoo ah shirqoolka baadilka ah kii ka danbeeyey ayuu ku noqdaa.
Somaliland raga hogaanka u haya waxay marin habaabiyeen wiilashooda oo ay dhul aysan u Dhalan usoo direen iyagoo uru bishaareynaya JANADII ICTIRAAFKA iyadoo aan la is weydiin dhulka yaa leh? Xagee loo maraa? Khayaamada iyo deris xumada ay muujiyeen Somaliland ama aan iraahdee beelaha Isaaq iyaga uun baa ka warami doona Marka xaalku is bedelo, hana ogaadeen iney markaasi tahay arintu mid aan wax ka qabad lahayn, waayo bur burka ay iyo khiyaamada iyo khiyaaliga ay xero Dhulbahante keeneen way ku noqon.
Puntland sheekadeeda waynu ka dheregsanahey iyo iney iyadu tahay masiibada ugu weyn eek u habsatey Xero Dhulbahante, taana shaki ka taagna. Puntland tolnimadii lagu dhisey iyo wanaagii lagu dhisey waa la is daba mariyey iyadoo dano gaar ah laga yeeshey.
Bur burka Puntland ama kala yaaca Harti hore ayey u bilaabatey, waxayna bilaabatey maalintii Majayahan ay beel sheeganeysa Puntland ay kusoo duushey iyadoo aan u aaba yeelin xaqa deegaanka iyo walaaltinimada dhex ooli jirey Harti. Kala yaaca Harti waxa uu xawaarihiisa sii qaatey maalintii Maakhir la istaajiyey iyadoo ay dadka deegaankaasi ay goosteen iney iyagu danahooda ka tashan doonaan oo aysan cidna wax ka sugeyn. Kala yaaca Harti waxa uu dhameystirmey maalintii ay Puntland ukala hiilisey beelo walaalo ah oo aan xaq ahayn in loo kala hiiliyo balse heshiis iyo nabad laga dhex dhaliyo.
Maakhir ama Warsangeli waa iney ka digtoonaadaan iney ku dhacaan talaabada Puntland, waa ineysan Maakhir afaaraha Sool dhex gelin iyadoo ukala hiilineysa. Maakhir waxaa laga doonayaa iney nabad iyo wanaag ugu baaqdo Sool iyadoo hiil nabadeed siineysa dadka reer Sool. Laascaanood dad walaalo ah ayaa isku qabtey, Somaliland awood kuma iman, 5sano ayey banaankeeda joogtey, waxaana dhegahayga weli ka quuxaya hadaladii uu yiri Garaad Saleebaan oo ahaa in Afqudhac masuul ka yahay dhibka ka dhacay Laascaanood, taas oo aan u fahmey in weerarkii Guriga Xaabsade uu ahaa mid aan habooneyn.
Ninka Jaamac Siyaad ama ka dhashey Bahararsame waa nin Dhulbahante ah, sidaa awgeed Maakhir waxaa laga doonayaa ineysan ukala hiilin ee waxaa laga doonayaa iney beelaha tolka ee walaalaha ah nabad ugu baaqdo. Waxaan hadaladaas ugu soo cel celinayaa oo aan ugu adkeynayaa in Maakhir ay tahay qeyb ka mid ah Harti oo marka Harti dhib soo gaaro daqmaneysa, hase yeeshee Cade Muuse oo ama maamulka Puntland ay durboba ku dhawaaqeen caadifada Harti oo doonaya iney dad walaalo ah madaxa isu geliyaan.
Ugu danbeyn waxaan Reer Maakhir iyo masuuliyiinta Maakhir ugu baaqayaa ineysan arinta Sool kusoo fara gelin si cadaawad, hadii ay wax ka qabaneysona ay uga qabato si walaaltinimo ku dheehan.
Reer Soolna waxaan ugu baaqayaa iney heshiiyaan, oo dhiigooda dhawrtaan iyagoo eegaya in cida dhibku soo gaarayo ay tahay Dhulbahante ee aysan ahayn Reer Galbeed ama Reer Bari, kana waantoomaan waxa aayahooda wax u dhimaya, maamul iyaga u madax bananna ay sameystaan oo jaah wareerka Somaliland iyo Puntland isaga baxaan..
Raz Shirwa [razshirwa@gmail.com]
London, UK by Anugaal.com
waxaan umada somaliyeed la socodsiinaynaa inay ka qaybqaataan dibi udiska dalka si
« Khilaaf beeleed Sababay dhimasho
Dagaal Hubka Cul Culus laysu adeegsanayo ayaa ilaa iyo haatan ka socda Qaybo ka mida ah Magaalada Bosaaso »